May Nyane: အချစ်အကြောင်း ပြောရအောင်.. တဲ့
အချစ်အကြောင်း ပြောရအောင်.. တဲ့
အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်းထဲက valentine's Day အမှတ်တရ စာ..
အချစ်ဆိုတာကို ခုလို အသက်၄၀တော်တော်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြန်ကြည့်တော့
တယောက်ကိုတယောက် သေသေချာချာ စိတ်ပါဝင်စားဖို့..
အခြေခံမှ ဖြစ်မှာပါလားလို့ မြင်ပါတယ်။
ပြန်တွေးကြည့်တော့ စိတ်ကစားတတ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက အချစ်လို့ ထင်တဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ စိတ်ထဲ ကူးသမျှ ယဉ်ယဉ်လေး ရူးခဲ့တာမျိုးသာပါလားဆိုတာကို တွေ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ တက္ကသိုလ်အရိပ်အာဝါသရဲ့ ဖမ်းစားမှုနဲ့ ချစ်မိသူတယောက် တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ အဲဒီလူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို သဘောမတွေ့ပါဘဲနဲ့ .. ကိုယ့်ကျင့်တရား မစောင့်ထိန်းတာကိုလည်း မနှစ်သက်ပါဘဲနဲ့ သူ့အပေါ် စိတ်လှုပ်ရှားတွယ်တာဖူးခဲ့ပါတယ်။
ကံကောင်းထောက်မလို့ ချစ်သူတွေဖြစ်ခွင့်မရပေမဲ့ အချစ်ဦးရယ်လို့ စွဲစွဲလန်းလန်း ရှိခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့…။ ဒါဟာ…. စိတ်ထဲ ကူးသမျှ ယဉ်ယဉ်လေး ရူးခဲ့တာမျိုးပဲ မဟုတ်ပါလား….
စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်)ခင်နှင်းယု ကတော့ "ချစ်သူကို လရောင်အောက်မှာ ရှာပြီး ဘ၀ဖော်ကို နေရောင်အောက်မှာ ရှာရတယ်"လို့ ရေးဖူးပါတယ်။
နောက်တော့ နည်းနည်းရင့်ကျက်လာတဲ့ အသက်နှစ်ဆယ်ပိုင်းမှာ ချစ်သူရယ်လို့ ဆုံရသူ ရှိလာ..။
ဘာတခုမှ မရေရာသေးတဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း မတွေး..
ဒီတကြိမ်မှာလည်း ၀ါသနာတူ… စိတ်ကူးယဉ်ပုံချင်း တူတယ်ရယ်လို့…
ဒီဘ၀ကိုတော့ သူနဲ့ပဲ ဖြတ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်.. ဘ၀ဖော်တွေအဖြစ် လက်တွဲ…။
ဒါပေမဲ့ ဘ၀ထဲက ကြိုမမြင်ခဲ့ရတဲ့ နောက်ပိုင်း စာမျက်နှာ တွေမှာတော့ အဆိုးတွေထဲ လက်ပစ်ကူးလို့… ခွဲခဲ့ကြရပါတယ်..။
ဒ်ါခင်နှင်းယုပြောသလိုဆို.. ဒါဟာ လရောင်အောက်မှာ ရှာခဲ့တဲ့ အချစ်မျိုးကြောင့်ပဲလား…။
ဒါကလည်း အတွေ့အကြုံတွေကို ဖြတ်သန်းပြီးမှသာ ရတဲ့ အသိမျိုးပါ...။
ဒီလိုနဲ့ အသက်တွေ ၃၀ တော်တော်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်…
နူးနူးညံ့ညံ့.. စိတ်လုံလုံခြုံခြုံ… အေးအေးချမ်းချမ်း…
လူ့ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရဆိုတာ ဒါပါပဲလားလို့ ခံစားခွင့် ကြုံရပြန်ပါတယ်။
အဲဒီတကြိမ်မှာတော့ အချစ်… ဆိုတာထက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ… ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုပဲ ပိုသတိရ…။ နောက်တကြိမ်ဆိုတဲ့ စကား.. ဒုတိယဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အားနာနာနဲ့ပဲ.. ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ရ…။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းစွာ……….. ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာကို ကြုံကြိုက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်…။
အဲဒီအခါ…. ကိုယ်တိုင် အချစ်ဆိုတာကို အတန်တန်ကြုံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အချစ်ဆိုတာထဲမှာ ကံတရား ဆိုတာလည်း ပါ... အနုပညာ ဆိုတာလည်း ပါ.. မေတ္တာတရားလည်း ပါ.. သံယောဇဉ်လည်း ပါ.. ကိုယ်ချင်းစာ ငဲ့ညှာမှုလည်းပါ... ရှင်သန်ကြီးထွားမှုလည်းပါ...။ အဲသလို အရောင်စုံ အသွေးစုံပါမှပဲ အချစ်ရယ်လို့ ဖြစ်တာမို့… အချစ်စစ်စစ်ဆိုတာ... ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ.. ရတောင့်ရခဲ.. ကြုတောင့်ကြုံခဲ... အနှစ်အမွန်တခုလို့ ယုံပါတယ်။
မေငြိမ်း ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁။
အဲသလို အရောင်စုံ အသွေးစုံပါမှပဲ အချစ်ရယ်လို့ ဖြစ်တာမို့… အချစ်စစ်စစ်ဆိုတာ... ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ.. ရတောင့်ရခဲ.. ကြုတောင့်ကြုံခဲ... အနှစ်အမွန်တခုလို့ ယုံပါတယ်။
I don't really know what is love but I like being loved.